नेपालमा हुँदैछ हतियार बेच्ने तयारी , प्रधानमन्त्रीको ठूलो खुलासा, (भिडियो) – Gandaki Media
नेपालमा हुँदैछ हतियार बेच्ने तयारी , प्रधानमन्त्रीको ठूलो खुलासा, (भिडियो)
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर हतियार बेच्ने ठूलो षड्यन्त्रमा एउटा समूह सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् ।
धुम्बाराहीस्थित पार्टी मुख्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेर बसेका नेपाली जनतालाई एकआपसमा लडाउन चाहेको आरोप लगाए । ‘धर्म, जाति, बर्ग, लिङ्ग, गोत्र आदिका नाममा नेपालीहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भएको छ’, उनले भने, ‘जातीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाएर हतियार बेच्ने ठूलो योजना बनेको छ ।’
ओलीले युरोपियन युनियनतर्फ संकेत गर्दै धर्मपरिवर्तनका नाममा नेपालमा ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालमा आफै घृणा, हिंसा र द्वन्द्व फैलाउने । त्यसपछि द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा आएर नेपाललाई गरिव बनाउने । विकास हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हतियार बेच्ने ठूलो षड्यन्त्रमा एउटा समूह सक्रिय रहेको आरोप लगाएका छन् ।
धुम्बाराहीस्थित पार्टी मुख्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेर बसेका नेपाली जनतालाई एकआपसमा लडाउन चाहेको आरोप लगाए धर्म, जाति, बर्ग, लिङ्ग, गोत्र आदिका नाममा नेपालीहरूविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भएको छ’, उनले भने, ‘जातीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाएर हतियार बेच्ने ठूलो योजना बनेको छ ।’ ओलीले युरोपियन युनियनतर्फ संकेत गर्दै धर्मपरिवर्तनका नाममा नेपालमा ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालमा आफै घृणा, हिंसा र द्वन्द्व फैलाउने ।
त्यसपछि द्वन्द्व व्यवस्थापनको नाममा आएर नेपाललाई गरिव बनाउने । विकास हुन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’नेपाली कांग्रेसविरुद्ध आक्रमक देखिएका ओलीले भन, ‘भारत भ्रमणमा गएका बेला एउटा दलका एक नेताले लम्पसारवादी भनेछन् । लम्पसारवादी भनेको केलाई हो ? कसलाई हो ? केही थाहा नपाउनेले त्यसो भन्ने !’ ओलीले कांग्रेसलाई विचार पु-याएर बोल्न सुझाव दिए । यसैबीच, पूर्वमन्त्री, पूर्वसंसद र पूर्वराजदूतसहित नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका झण्डै २०० जना नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।
पूर्वराज्यमन्त्री तथा नयाँ शक्ति नेपालको कार्यकारिणी सदस्य लीला भण्डारी, पूर्वराजदूत माया शर्मा, सुकदैया चौधरीसहितका नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरू सबैलाई ओलीले एमालेमा प्रवेश गराएका हुन् !
ज्योति मगर तथा सरस्वोती लामा भन्ने बित्तिकै चर्चाका लागी जे पनि गर्ने र नेपाली लोकगित संगित क्षेत्रमा बिकृती ल्याउने गायिका तथा मोडल भनेर धेरैले सोच्छन, । बुज्छ्न त्यसो त उनका पछिल्ला गतिबिधि मात्रै हेरे बुझको मान्छले त्यसो भन्नु पनि स्वभाबिक नै हो। ज्योति मगर तथा सरस्वोती लामा छोटा लुगा लगाएर स्टेज चढेर होस् या पछिल्लो […]